म धेरै भाग्यमानी छु - अन्तर्वार्ता - नारी
म धेरै भाग्यमानी छु
निशा शर्मा : कलाकार तथा नाट्यकर्मी
कार्तिक ९, २०७५ कलर बक्सको कुनै रंग बन्न पाउनुभयो भने कुन रंग बन्न चाहनुहुन्छ ?
कालो वा सेतो । किनभने यी तटस्थ रंग हुन् जुनमा पनि मिसिन सक्छन् ।
तपाईंले कसैलाई कुनै कामको जिम्मा दिनुभयो, जसलाई उक्त काम पटक्कै गर्न मन लाग्दैन, गराउनैपर्दा कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ ?
जीवनमा अनेकन चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ, तिमी यति सानो कुराबाट भाग्छौ भने बाँकी जीवनसँग कसरी जुध्छौ भनेर सम्झाउँछु ।
घोडा आकारको एउटा हाँस वा हाँस आकारका सय वटा घोडा कुनसँग जुध्न चाहनुहुन्छ ?
घोडा आकारको एउटा हाँससँग, किनभने सय हाँस बराबर एउटा घोडा हो ।
सयको नोट उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्ने अवसर मिल्यो भने तपाईं त्यो मेसिनलाई कति मूल्य तिर्न तयार हुनुहुन्छ ?
पहिले त्यो वैध हो कि अवैध बुझ्छु । यदि वैध भए कति वर्ष बाँचिन्छ त्यही हिसाबले मूल्य तिर्छु । जे होस् आफूलाई घाटा नपर्ने गरी मूल्य लगाउँछु ।
समुद्री बोटमा यात्रा गर्ने सबै साथी पानीमा डुबे तर तपार्इं टापुमा उत्रिएर बाँच्न सफल हुनुभयो भने ?
त्यो जस्तो सुखद् के होला ? माछा मार्छु, वनमा घुम्दै कन्दमूल खोजेर खान्छु । जीवनको त्यो पाटोको आनन्द उठाउँछु ।
तपाईं कति भाग्यमानी र किन ?
म धेरै भाग्यमानी छु । म मेहनतअनुसार आफ्नो पेसामा सफल भएँ । मेरो छोराले मलाई एकदम माया गर्छ, मलाई छोडेर कतै जान मान्दैन । अर्को कुरा हामी परिवारका सबै सदस्य नै एक–अर्कालाई असाध्यै माया गर्ने प्रकृतिका छौं । धेरै माया पाएकैले म भाग्यमानी छु ।
जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पटक–पटक दोहोर्‍याएर एउटा मात्र नाटक हेर्नुपर्ने भयो भने कुन नाटक हेर्नुहुन्छ ?
शेक्सपियरको ह्यामलेट हेर्छु ।
यदि कसैले तपाईंको बायोग्राफी लेख्दैछ, शीर्षक के दिन चाहनुहुन्छ ?
रंगमञ्चमा निर्वाह गर्न मन लागेको पात्र ?
गौतम बुद्धकी श्रीमती यशोधराको चरित्र निर्वाह गर्ने मन छ ।
आश्विन ९, २०७५ - भाग्यमानी कविता
श्रावण २०, २०७५ - एकैपटक धेरै काम गर्नु खतरनाक
श्रावण १३, २०७५ - घरपालुवाले धेरै खाने समस्या
"पद्य र गद्य लेखनका आ–आफ्नै सामर्थ्य" - शारदा शर्मा, साहित्यकार भाद्र १४, २०७७
‘खाद्य सुरक्षामा अझै धेरै चुनौती छ’ जेष्ठ २७, २०७७
‘वातावरण संरक्षणमा महिलाको भूमिका अपरम्पार छ’ जेष्ठ २३, २०७७
कोरोनासित डर लाग्न छाड्यो: उषा खड्गी जेष्ठ २१, २०७७
स्किन सफा राख्न केमिकल पिलिङको क्रेज बढ्दैछ वैशाख २५, २०७७